University of Rostock - Higher Education na Europe, Germany
University of Rostock Nkọwa
City : Rostock
acronym : Ua
tọrọ ntọala : 1419
Students (ihe ruru.) : 16000
Echefukwala atụle University of Rostock
Idebanye aha na University nke Rostock
na ya 200,000 bi, Rostock e ji nkà mmụta sayensị, aku na uba na ọdịbendị site 15,000 ụmụ akwụkwọ na ndị ọrụ nke 5,000 na University of Rostock na mahadum ọgwụ. Mpụga ego zụrụ maka nnyocha bilie n'etiti 2005 na 2010 site 83% na ugbu a na-anọchi n'elu 47 nde Euro iri na ato kwa afọ. The University of Rostock bụ n'etiti ihe iri nchoputa-enyi na enyi akwụkwọ dị elu establishments na Germany. The mpaghara aku benefitted si n'elu 800 amalite-elu na ụlọ ọrụ ndị na-ulo oru site na mahadum ebe ọ bụ na 1991. Eto eto na-si West nke Germany na-amụba nọmba nke mba ọzọ ụmụ akwụkwọ na-achọpụta Rostock dị ka a na-amụ na ọnọdụ. ụmụ akwụkwọ si 99 mba pụrụ ịchọta ugbu on anọ campus ebe ke obio. ebe ọ bụ na 1991 n'elu 500 nde Euro iri na ato e nyekwara ke akụrụngwa nke mahadum. site 2015 ọ ga-ngụkọta 750 nde.
Education na nnyocha malitere na Rostock ọbụna 73 afọ tupu Columbus chọpụtara America dị ka mahadum e tọrọ ntọala ugbua na 1419. A otutu agbanweela na ọ dịgodị. Dị ka teknuzu ngalaba hiwere na 1951 – bụ onye mbụ e guzobere na a oge gboo mahadum. Ọtụtụ ọhụrụ, oge a ụlọ, dị ka dị ọhụrụ campus maka eke na sayensị na district Suedstadt, anọchite anya ndị na-achọpụta ihe ọhụrụ ike na modernity anyị mahadum. na 2011 banyere 15,000 ụmụ akwụkwọ na-amụ na Rostock si mahadum.
The isi na nkà mmụta sayensị ngalaba - azụmahịa sayensị, Humanities, engineering sayensị, iwu, nkà mmụta ọgwụ, Mmadụ sayensị na nkà mmụta okpukpe - na-anọchi anya ma na nnyocha na agụmakwụkwọ na Mahadum nke Rostock.
radition na ọhụrụ bụ akara ụghalaahịa nke anyị fọrọ nke nta 600 afọ akụkọ ihe mere. taa, na 2,200 ọrụ na 15,000 ụmụ akwụkwọ, na University of Rostock awade adọrọ mmasị echiche n'ime ihe fọrọ nke nta niile na nkà mmụta sayensị ubi. Na ihe anọ ahụ profaịlụ edoghi Life, Ìhè na Ihe / Maritime Systems / Merela agadi Science na Humanities / Ihe ọmụma - Culture - Mgbanwe, na University of Rostock nwere n'oge ya mkpofu magburu onwe interdisciplinary nnyocha ubi na ebe nke eke na nkà na ụzụ na nkà mmụta, nkà mmụta ọgwụ, ndụ sayensị, Humanities na omenala ọmụmụ. The ọkọlọtọ set niile anyị mere: anyị chọrọ ime Ọrụ anyị.
The Hanseatic mahadum n'obodo Rostock bụ a akwa ebe na-amụ, nnyocha na ndụ. The aku na nkà mmụta sayensị center nke North-East bụ nnọọ na-adọrọ adọrọ, na ndị niile na ikuku nke a bụ isi obodo nke dị n'etiti nke otu n'ime ihe ndị kasị mma njem nleta ebe na Germany. -Achọpụta anyị uru maka onwe gị! Anyị na-ele anya ịhụ gị.
Faculty of Computer Science na Ọdụdọ Engineering
Faculty of Iwu
Faculty of Mechanical Engineering na Marine Technology
Faculty of Mathematics na Natural Sciences
t e hiwere na 1419 site na nkwenye nke Pope Martin V na otú bụ mahadum kasị ochie Northern Europe.
na Germany, e nwere nanị ise mahadum na e tọrọ ntọala tupu, mgbe naanị Heidelberg na Leipzig ejikwara nọgidere kemgbe ahụ: Heidelberg (1386), Cologne (1388), Erfurt (1392/1994), Würzburg (1402/1582) na Leipzig (1409). Na-eme ka Rostock University nke atọ ndị kasị mee okenye German mahadum na-aga n'ihu ime.
Kemgbe narị afọ nke 15, na University nke Rostock nwere banyere 400 ka 500 ụmụ akwụkwọ n'afọ ọ bụla, a ọnụ ọgụgụ buru ibu n'oge ahụ. Rostock bụ otu n'ime ndị kasị ibu mahadum Germany n'oge na ọtụtụ n'ime ụmụ akwụkwọ, na ala Low N'ókèala, Scandinavia ma ọ bụ ọzọ na-ekwu n'ókè nke Baltic Sea.
Na N'ezie nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị siiri na nsogbu si na chọọchị, mahadum kwagara Greifswald na 1437 na nọgidere n'ebe ahụ ruo 1443. site 1487 ka 1488 ozizi wee ebe na Lübec.
A afọ ole na ole mgbe e mesịrị obodo Rostock, ya mahadum ghọkwara Protestant na 1542. Madu na Lutheran na-akọwapụta e ji mara nke mahadum. Mgbe Iri Afọ Atọ’ War (1618-1648), na University nke Rostock egwuri naanị a mpaghara ọrụ. mgbe “nwe” nke mahadum si obodo na ala (Grand Duchy nke Mecklenburg-Schwerin) na 1827, Otú ọ dị, ihe gbanwere ka mma. Ọgwụgwụ nke narị afọ nke 19 hụrụ na-emesapụ aka ụlọ ọrụ Rostock na Alma mater na mahadum anya nwetaghachiri ya ochie aha n'etiti German mahadum.
On oge nke 500th ncheta nke mahadum, Albert Einstein na Max Planck natara asọpụrụ doctorates on 12 November 1919. Nke a mere ka ndị University of Rostock ụwa mbụ guzobe ememe nke mmụta ka elu ka award a nsọpụrụ Einstein. na-akpali mmasị ezuru, na doctorate e kagburu n'oge Nazi na-achị na Germany (1933-1945), n'agbanyeghị ụdị iwu site ndị Nazi. Ihe kpatara nke a na-anọgide na-amaghị. David Katz, Hans Moral (nke) (gburu onwe) na ndị ọzọ na-efu ha posts na 1933.
Ọgwụgwụ nke Agha Ụwa nke Abụọ na 1945 ka ọtụtụ mgbanwe. The mahadum, ugbu a na-achọta onwe ke Soviet Mpaghara nke Germany (na mgbe e mesịrị German Democratic Republic), e re-meghere on 24 February 1946. The Faculty of Iwu e mechiri 1951, a Faculty of Agriculture ke ẹkenam ke 1950 na na 1951 hu oghere nke a Department of shipbuilding (renamed Faculty of Technologyna 1963). The University of Rostock bụ nke mbụ na omenala mahadum na Germany na-emeghe a technical ngalaba. na 1952, na Faculty ofAviation e mepere, ma n'ikpeazụ, kwagara Dresden.
na 1976 na mahadum e renamed Wilhelm-Pieck-Universität mgbe Wilhelm Pieck, onyeisi oche mbụ nke German Democratic Republic. The renaming e akagbu akagbu mgbe German reunification.
na 1978, mahadum aku a mmekorita ya na Cochin University of Science and Technology (seamstress), aka chepụta N'ezie Ọdịdị na akwado mmepe nke Department of Ụgbọ mmiri Technology na CUSAT. Ọzọkwa, a ìgwè nke Rostock ngalaba òtù e zigara Cochin University of Science and Technology rụọ nkuzi mahadum ụlọ ọrụ, fọdụrụ n'ebe ahụ ruo mgbe afọ n'afo 1980. Ndị a ma ama ebe Cochin University of Science and Technology si Department of Ụgbọ mmiri Technology na ụwa Maritime ụlọ ọrụ si otú a n'ụzọ dị ukwuu si n'aka ndị ọtụtụ ihe nkwado nke University of Rostock.
The mpaghara aku na uba mma dị ka n'elu 800 ụlọ ọrụ ulo oru si mahadum kemgbe 1991. Mpụga ego maka nnyocha mụbara n'agbata 2005 na 2010 site 83% na ugbu a bụ n'elu 47 nde Euro iri na ato kwa afọ. N'ime 500 nde Euro iri na ato e nyekwara ke mahadum akụrụngwa ebe 1991, nke ga-eru 750 nde Euro iri na ato site 2015. The ọnụ ọgụgụ nke na-eto eto si West Germany na mba ụmụ akwụkwọ na-ahọrọ University of Rostock dị ka a na-amụ ebe, na-amụba kwa afọ. International Mmụta si 99 mba dị iche iche e mụọ na University nke Rostock. na 2007, na University nke Rostock chikọta ya research akọ n'ime atọ profaịlụ edoghi: Life, Light & ihe (LLM), Maritime Systems, na ịka nká nke Ndị mmadụ n'otu n'otu na Society. na 2010 a anọ e kwukwara, akpọ Knowledge-Culture-Mgbanwe. Life, Light & Ihe na-amalite ọhụrụ echiche ga-eme n'ọdịnihu teknụzụ dabeere atọm na molekụla Filiks na njikọ na laser Gbasara Anya na ndụ sayensị. Maritime Systems n'otu oceanographers, injinia, Humanities ọkà mmụta, ugbo na-elekọta mmadụ ndị ọkà mmụta sayensị, economists na ọkàiwu. Ịka nká nke Ndị mmadụ n'otu n'otu na Society nwere dị ka ya lekwasịrị a onwe-kpebisiri ike si ebi ndụ na agadi. Ihe ọmụma-Culture-Mgbanwe amụọ na media na ihe yiri ihe ọmụma, mgbanwe nke ihe ọmụma, ihe ọmụma na interculturalism nakwa dị ka ihe ọmụma na ike.
Ị chọrọ atụle University of Rostock ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
University of Rostock na Map
photos: University of Rostock ukara Facebook
Jikọọ na-atụle nke University of Rostock.
Ndị ọzọ na mahadum na Germany
University of Rostock Rostock
Dortmund University of Technology Dortmund
Nka na ụzụ University of Berlin Berlin
University of Freiburg Freiburg
University of Duisburg-Essen eri
Ruhr University Bochum Bochum